musha / zvishongedzo / Faucet accessories / WOWOW Pop Up Drain Stopper Inotsiva Zvikamu
pop up drain iri yendarira mamiriro, iyo inovimbisa simba uye kutsungirira. Iyo nhema uye chrome kupedzisa, iyo inogona kutaridzika kutaridzika.
pop up drain uye simudza tsvimbo X3001 ndiyo nzvimbo yakakanda kutevedzera pivot pole uye ndarira pivot, uye zvakare inorema-yebasa rabha washer yekudzivirira marata. Yayo inopenya chrome kupedzisa inokodzera zvakanyanya kushandiswa zvinonamatira zvinyoreso, zvinoreva kuti imba yekugezera yako inosanganisira kuwirirana kutarisa. Iwe unogona kuiisa zvakachengeteka, chero bedzi Keeney inotsigira Zvakagadziriswa zvigadzirwa.
Bathroom faucet zvisina zvazvinobatsira kunyura pop-up drain Stopper musangano nerokusimudza tsvimbo uye kufashukira
Kufashukira kwakakodzera imba yekugezera kusaina kunyura ine dhayeti gomba diimita 1-1 / 2 "kana 1-3 / 4"
Saizi yakaenzanaUS pombi dzemvura
Yakapenya chrome pamusoro
Kuiswa kwacho kuri kwakaomarara zvishoma, asi kuraira kwedu kwakajeka.
Ndeupi musiyano uripo Pakati pePop Up Kutakura Nekufashukira Uye Pasina?
1. Musiyano uripo pakati pekuti mvura inogona kudzivirirwa kubva mukufashukira pasi pevhu. Dhishi rekunyura mune ye sanitary ware rine basa rakawandisa. Kana mvura iri muhari yekuchena ikakwira kusvika pakufashukira, inoyerera ichibva kumafuro emvura, uye haizopfachukira kuzadza imba yako; Kana ichizara, ichafashukira yakananga pasi.
2. Musiyano uripo pakati pekuchena nehutsanana. Dhishi rekushambidza mune yekuchenesa sanction rine basa rakawedzera. Mvura iri mubheseni yekushambidza painodarika imwe nhanho, mvura iri mubheseni yekushambidza ichave yakango dururwa kubva pano, uye haizounganidze mumvura yekugezesa. Nechinwiwa chinoshanda, mvura iri mubheseni inounganidza mudhishi, kuunganidza hutachiona, uye haina kuchena.
3. Iyo kuchengetedzwa kwakasiyana pakukanganwa kudzima mvura. Dhishi rekunyura mune ye sanitary ware rine basa rekufashukira, kunyangwe ukakanganwa kudzima mvura, mvura yacho ichayerera, uye hainga kuyerera pasi; dhure pasina basa rekufashukira, paunokanganwa kudzima switch, mvura ichafashukira pasi.
WOWOWfaucet's sanitary ware basin drainer ine mafashama kuita kuti yako yekugezera nharaunda ive yakachena uye nehutsanana.
SKU: X3001-chrome Categories: zvishongedzo, Faucet accessories Tags: gungano, Bathing Sink, Replacement